Qaar kamid ah Ergadii soo dooratay Xildhibanada Golaha Shacabka oo u tagay Al shabaab – Somali Top News
Qaar kamid ah Ergadii soo dooratay Xildhibanada Golaha Shacabka oo u tagay Al shabaab
July 10, 2019 Somali Top News	0 Comments
Xildhibaan Maxamed Xuseen (Afaraale) oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sheegay in xilligaan Al-Shabaab ay dhibaato ku hayaan dalka,isla markaana dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay waxka qabato.
Waxa uu sheegay in haatan ay mareyso in Ergadii soo dooratay Xildhibaannada Golaha Shacabka ay u yeeraan Al-Shabaab,isla markaana Ergadii isaga soo dooratay ay ka mid yihiin kuwa ay u yeereen Al-Shabaab.
“Runtii waxan maqlay in dhamaan ergadii nasoo dooratay loo yeeray,aniga hadda idinla hadlayo ergadii i soo dooratay waxaa ay ku sugan yihiin deegaanka Iidaale oo looga yeeray,marka waxaana rabaa in Al-Shabaab aan u midowno lana dagaalano ayuu yiri Xildhibaan Afaraale.
Hadalka Xildhibaan Afaraale ayaa kusoo aadaya xilli horay loo dilay qaar ka mid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada Golaha Shacabka,waxaana dilalkaas mas’uuliyadooda sheegtay Al-Shabaab.
← Lataliyaha Madaxweyne Farmaajo oo shir caalami ah uga qeyb galaya dalka Kenya
Russia sends new Ambassador to Somalia after nearly 3 decades →
Booliska Somaliland oo xabsiga dhigay wasiirka Warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta
Maxey ka wada hadleen madaxda ugu sarreysa dalka oo xalay Madaxtooyada kukulmay?
Dowladda Federalka oo ku amartay diyaaradaha aada Kismaayo iney Muqdisho soo maraan
August 29, 2019 August 29, 2019 Somali Top News 0